Quinta Codornices e Arteaga, Coahuila Mexico
I-Quinta codornices yindlu endala yelizwe ephangaleleyo esasazwa kwimigangatho emi-2, kunye ne-terrace enkulu enegrill eyakhelweyo. I-1.86 yeekhilomitha ukusuka e-Arteaga (Pueblo Mágico) kwaye yimizuzu eyi-10 kuphela ukuya eSaltillo, indlu imalunga neekhilomitha ezingama-60 ukusuka eBOSQUES DE MONTERREAL. Indlu ineendawo ezinamagumbi okuhlala kunye nosapho lwakho kunye nabahlobo, yenza i-BBQ kwaye uvumele abantwana ukuba babaleke kwaye badlale. Siqinisekile ukuba uyakufumana ukuzola kunye nokuphumla okulangazelelayo ngokujonga okuhle kunye nemozulu entle.
I-Quinta codornices ifakwe ngokupheleleyo kwaye ixhotyiswe kwisitayile sakudala selizwe, kunye neendawo ezinkulu zokuxhoma ngaphakathi okanye ngaphandle.
Ehlabathini kukho igumbi lokuhlala eline-smart tv kunye ne-intanethi, ithala leencwadi elincinci kunye negumbi lokutyela, ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye linetafile yesidlo sangokuhlwa, kumgangatho ophantsi uya kufumana igumbi lokuhlambela impahla enomatshini wokuhlamba kunye negumbi lokuhlambela. umatshini owomileyo igumbi lokuhlambela eligcweleyo kunye negumbi lokulala eli-1 elinebhedi yobukhulu bokumkanikazi
Kumgangatho wesibini uya kufumana igumbi lokulala eliphambili (ibhedi yenkosi) isofa enegumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlambela elinebhafu yokuhlambela, kunye namagumbi amabini okulala angaphezulu anendawo yokuhlambela yesibini. Elinye lala magumbi linebalcony enkulu/ithala elineembono ezintle zeentaba ezinkulu ukuba nekomityi yeti kwaye ubukele ukutshona kwelanga, kwaye ube nepatio enkulu yezinja.
Igaraji yeemoto ezimbini yeyancinci okanye imoto enkulu kwaye ithala linendawo yokuhombisa ye-hacienda yaseMexico, kunye nendawo egqibeleleyo yokonwabela ezinye zeemveliso zommandla (iwayini, inyama, itshizi kunye neziqhamo). Kukwakho nesitiya esinojingi abaza kudlala ngaso abantwana abancinci.
4.76 · Izimvo eziyi-18
Uphuhliso luphakathi kweSaltillo kunye neArteaga. Indawo izolile kwaye izolile f, ilungile ukuthatha uhambo okanye uphonononge ngebhayisekile yakho.
Sihamba ngemizuzu eyi-15 kuphela ukusuka endlwini ukuba ufuna uncedo ngayo nantoni na. Kwakhona singakuvuyela ukucebisa apho sinokutya kunye neendawo esinokuzityelela kulo mmandla.